အရောင်ဆန်းတွေကို ဆရာကျကျတွဲဖက်ဝတ်ဆင်နိုင်ဖို့ ဖက်ရှင်နည်းလမ်း (၅) သွယ် – For her myanmar
Posted on April 24, 2019 April 24, 2019 Author Stella	Comment(0)
သူမတူဘဲအထာကျချင်ရင်တော့ အရောင်ဆန်းတွေက မရှိမဖြစ်ပဲ 🤔🤔
ဗီရိုထဲကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ငါဝယ်လိုက်တိုင်း အနက်တွေချည်းပဲလို့ တွေးမိဖူးလား ? ယောင်းတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ လူတော်တော်များများက အဖြူ၊ အနက်၊ မီးခိုးစတဲ့အရောင်တွေကိုပဲ မသိလိုက်မသိဖာသာဝယ်မိတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတလေ အရောင်ဆန်း အဆင်ဆန်းလေးတွေ ဝတ်ကြည့်ဖို့ စိတ်ကူးကြည့်ပေမဲ့ မလိုက်မှာစိုးတာနဲ့ပဲ မဝတ်ဖြစ်ပြန်ဘူး။ အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ယောင်းတွေအတွက် Stella က အရောင်တွေကို ဘယ်လိုလိုက်ဖက်အောင် ဝတ်ရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေ မျှဝေပေးမယ်နော်။
(၁) အရောင်အနုအရင့် တွဲဝတ်ကြည့်ပါ
ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးတစ်ရောင်တည်းဆိုတော့ ခေါင်းစားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ Stella တို့က တစ်ရောင်တည်းဆို မဝတ်ချင်ကြတာများတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ အရောင်တစ်ရောင်တည်းကိုပဲ အနုအရင့်စပ်ပြီး ဝတ်ကြည့်ပါ။ အလွယ်ဆုံးကတော့ အောက်ခံအင်္ကျီကို အရောင်နုဝတ်ပြီး ဘောင်းဘီနဲ့ အပေါ်ထပ်အင်္ကျီကိုတော့ ခပ်ဆင်ဆင်အရောင်ရင့်နဲ့ တွဲဝတ်တာမျိုးပါ။
Related article >>> အဝတ်အစားဝတ်တဲ့အခါ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အရောင်ကို ဘယ်လိုရွေးမလဲ ?
(၂) အဓိကအရောင်တွေကို တွဲဝတ်ကြည့်ပါ
တွဲစပ်ဝတ်ဖို့အဆင့်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ အဓိကအရောင်တွေကို ဘယ်လိုဝတ်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားပါ။ အဓိကအရောင်တွေဆိုတာကတော့ အနီ၊ အပြာ နဲ့ အဝါကို ပြောတာပါ ယောင်းရေ။ ဘာလို့ဒီသုံးရောင်ကို အဓိကအရောင်တွေလို့ ခေါ်တာလဲဆိုတော့ အခြားအရောင်တွေဟာ ဒီသုံးရောင်နဲ့စပ်မှ ထွက်လာတဲ့အရောင်တွေမို့ပါ။ (ဥပမာ – အနီ+အပြာ=ခရမ်း၊ အဝါ+အပြာ=အစိမ်း) ဆိုတော့ … ဒီသုံးရောင်က အပေါ်အောက်တွဲဝတ်ရင် မျက်စိပသာဒဖြစ်စေပါတယ်။
(၃) Analogous tones တွေကို စဉ်းစားပါ
အရင်ဆုံး Analogous tones ဆိုတာဘာလဲကို Stella ရှင်းပြပါမယ်နော်။ Analogous tones ဆိုတာက ပုံမှာပြထားတဲ့အရောင်တွေထဲက ဘေးချင်းကပ်အရောင်တွေပါ။ Analogous tones ပုံလေးကိုတော့ ယောင်းတို့မြင်သာသွားအောင် ထည့်ပေးထားပါတယ်။
ဒီအရောင်တွေကို သုံးတွဲစီအထိ တွဲဖက်ဝတ်ရင် လိုက်ကိုလိုက်တာ အာမခံပါတယ်။ Stella ဆို ဒီနည်းသိတည်းက လိုက်ဝတ်တော့တာပဲ။ ကြောင်ကြောင်ကျားကျားဖြစ်မယ်ထင်ခဲ့တာ ဝတ်ကြည့်မှတော်တော်ကြည့်ကောင်းပါတယ်။
(၅) အရောင်တွေ ရွေးရခက်လာပြီဆိုရင်
လူတွေမေ့နေကြတဲ့အရောင်တွေ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ ရွှေရောင်၊ ငွေရောင်၊ ကြေးနီရောင်စတဲ့ သတ္တုရောင်တွေပါ။ ဒီအရောင်တွေကို အပေါ်ကနေ အရောင်တောက်တောက်ကုတ်တွေနဲ့ ထပ်ဝတ်လိုက်ရင် အမိုက်စားဖက်ရှင်ကိုရမှာ အသေအချာပါပဲ။
ကဲ … ဒီလောက်ဆိုရင် ယောင်းတို့လည်း အရောင်တွေကို ပရိုကျကျဘယ်လိုတွဲဖက်ပြီး ဝတ်ရမလဲဆိုတာ သိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ နောက်လည်း ယောင်းတို့အမြဲယုံကြည်မှုရှိရှိလှနေနိုင်အောင် ဖက်ရှင် tips လေးတွေ မျှဝေပေးသွားမှာဆိုတော့ Stella ရဲ့ပို့စ်လေးတွေကို စောင့်ဖတ်ပေးကြဦးနော်။
သူမတူဘဲအထာကခြငျြရငျတော့ အရောငျဆနျးတှကေ မရှိမဖွဈပဲ 🤔🤔
ဗီရိုထဲကိုဖှငျ့ကွညျ့လိုကျတာနဲ့ ငါဝယျလိုကျတိုငျး အနကျတှခေညျြးပဲလို့ တှေးမိဖူးလား ? ယောငျးတဈယောကျတညျးမဟုတျပါဘူး။ လူတျောတျောမြားမြားက အဖွူ၊ အနကျ၊ မီးခိုးစတဲ့အရောငျတှကေိုပဲ မသိလိုကျမသိဖာသာဝယျမိတတျကွပါတယျ။ တဈခါတလေ အရောငျဆနျး အဆငျဆနျးလေးတှေ ဝတျကွညျ့ဖို့ စိတျကူးကွညျ့ပမေဲ့ မလိုကျမှာစိုးတာနဲ့ပဲ မဝတျဖွဈပွနျဘူး။ အဲ့လိုဖွဈနတေဲ့ယောငျးတှအေတှကျ Stella က အရောငျတှကေို ဘယျလိုလိုကျဖကျအောငျ ဝတျရမလဲဆိုတဲ့ နညျးလမျးလေးတှေ မြှဝပေေးမယျနျော။
(၁) အရောငျအနုအရငျ့ တှဲဝတျကွညျ့ပါ
ခွဆေုံးခေါငျးဆုံးတဈရောငျတညျးဆိုတော့ ခေါငျးစားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဒါပမေဲ့ Stella တို့က တဈရောငျတညျးဆို မဝတျခငျြကွတာမြားတယျ။ ဒါဆိုရငျတော့ အရောငျတဈရောငျတညျးကိုပဲ အနုအရငျ့စပျပွီး ဝတျကွညျ့ပါ။ အလှယျဆုံးကတော့ အောကျခံအင်ျကြီကို အရောငျနုဝတျပွီး ဘောငျးဘီနဲ့ အပျေါထပျအင်ျကြီကိုတော့ ခပျဆငျဆငျအရောငျရငျ့နဲ့ တှဲဝတျတာမြိုးပါ။
Related article >>> အဝတျအစားဝတျတဲ့အခါ ကိုယျနဲ့လိုကျဖကျတဲ့အရောငျကို ဘယျလိုရှေးမလဲ ?
(၂) အဓိကအရောငျတှကေို တှဲဝတျကွညျ့ပါ
တှဲစပျဝတျဖို့အဆငျ့သငျ့ဖွဈပွီဆိုရငျတော့ အဓိကအရောငျတှကေို ဘယျလိုဝတျမလဲဆိုတာ စဉျးစားပါ။ အဓိကအရောငျတှဆေိုတာကတော့ အနီ၊ အပွာ နဲ့ အဝါကို ပွောတာပါ ယောငျးရေ။ ဘာလို့ဒီသုံးရောငျကို အဓိကအရောငျတှလေို့ ချေါတာလဲဆိုတော့ အခွားအရောငျတှဟော ဒီသုံးရောငျနဲ့စပျမှ ထှကျလာတဲ့အရောငျတှမေို့ပါ။ (ဥပမာ – အနီ+အပွာ=ခရမျး၊ အဝါ+အပွာ=အစိမျး) ဆိုတော့ … ဒီသုံးရောငျက အပျေါအောကျတှဲဝတျရငျ မကျြစိပသာဒဖွဈစပေါတယျ။
(၃) Analogous tones တှကေို စဉျးစားပါ
အရငျဆုံး Analogous tones ဆိုတာဘာလဲကို Stella ရှငျးပွပါမယျနျော။ Analogous tones ဆိုတာက ပုံမှာပွထားတဲ့အရောငျတှထေဲက ဘေးခငျြးကပျအရောငျတှပေါ။ Analogous tones ပုံလေးကိုတော့ ယောငျးတို့မွငျသာသှားအောငျ ထညျ့ပေးထားပါတယျ။
ဒီအရောငျတှကေို သုံးတှဲစီအထိ တှဲဖကျဝတျရငျ လိုကျကိုလိုကျတာ အာမခံပါတယျ။ Stella ဆို ဒီနညျးသိတညျးက လိုကျဝတျတော့တာပဲ။ ကွောငျကွောငျကြားကြားဖွဈမယျထငျခဲ့တာ ဝတျကွညျ့မှတျောတျောကွညျ့ကောငျးပါတယျ။
(၅) အရောငျတှေ ရှေးရခကျလာပွီဆိုရငျ
လူတှမေနေ့ကွေတဲ့အရောငျတှေ ရှိပါတယျ။ ဒါတှကေတော့ ရှရေောငျ၊ ငှရေောငျ၊ ကွေးနီရောငျစတဲ့ သတ်တုရောငျတှပေါ။ ဒီအရောငျတှကေို အပျေါကနေ အရောငျတောကျတောကျကုတျတှနေဲ့ ထပျဝတျလိုကျရငျ အမိုကျစားဖကျရှငျကိုရမှာ အသအေခြာပါပဲ။
ကဲ … ဒီလောကျဆိုရငျ ယောငျးတို့လညျး အရောငျတှကေို ပရိုကကြဘြယျလိုတှဲဖကျပွီး ဝတျရမလဲဆိုတာ သိလောကျပွီထငျပါတယျ။ နောကျလညျး ယောငျးတို့အမွဲယုံကွညျမှုရှိရှိလှနနေိုငျအောငျ ဖကျရှငျ tips လေးတှေ မြှဝပေေးသှားမှာဆိုတော့ Stella ရဲ့ပို့ဈလေးတှကေို စောငျ့ဖတျပေးကွဦးနျော။
Tagged color matching, Fashion, mix and match, Outfit, styling, tips
Fashion Fashion & Beauty Tips
ဝတ်စုံပြည့်မဝတ်ချင်တဲ့ ယောင်းတို့အတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရုံးတက်ဖက်ရှင်အတွဲအစပ် (၃) ခု
Posted on March 8, 2019 March 8, 2019 Author Stella
ရုံးသွားဖို့အရေး ဘာဝတ်ရမလဲစဉ်းစားရတာ အလုပ်တစ်လုပ်
အသက် (၄၀) ဝန်းကျင်မမတွေ ဖက်ရှင်ကျကျလန်းနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း (၅) သွယ်
Posted on April 29, 2019 Author Stella
အသက် (၄၀) ကျော်တွေ မလန်းရဘူးလို့ ဘယ်သူပြောလဲ ?
မိန်းကလေးတိုင်းမှာ ရှိထားသင့်တဲ့ အဖြူရောင်ဝတ်စုံလေးများ
Posted on June 25, 2018 July 25, 2018 Author Akari
သတိထားရမယ့် အချက်လေးတွေလည်း တစ်ခါတည်း ထည့်ထားပေးတယ်နော်.. 😉